Harowo.com | HarawoNews – Somalia Information & Analysis – NOO TALI ALLAHAYOW SI AY NOQONBA MOOYEE…
NOO TALI ALLAHAYOW SI AY NOQONBA MOOYEE…
Feb 01, 2013 SOMALI NEWS 1
Dowlada Somaaliland waxay oqoonsi ka raadisaa dhibeda, laakiin isma ay waydiinin waxa u aqoonsigu yahay iyo sida loo helo. Aqoonsiga waxa marka hore laga raadiyaa wadanka gudihiisa iyo shicibka dhexdiisa. Waxa nasiib dara ah in ayna xukuumadiihii hore iyo tan imikuba in ayna ogaan u gara marayaan wadada loo maro dowladnimo taam ah iyo aqoonsi buuxa.
Dowladnimo iyo aqoonsi laguma helo kala qaybin shicib, Cadaalad darado, xugun qabiil ah, isku dir shicib, iyo anigaa modan. Waxa waanyahan danbe caan noqotay in dowladu ay noqotay reer kaliya oo kalideed talis ah. Waxay Somaaliland xukuumado u qaybisay saddex qaybood: Qaybta Galbeedka, ta dhexe, iyo ta bari. Waxad la socotaan, howla fooshaxun ee ka socda wadanka. Waxaad la socotaan in xunku yaalo qaybta dhexe oo waliba reer ka mid ah qaybta dhexe isku goobeen xukunkii iyo dhaqaalihii wadanka. Waxaad ogtihiin in ay dagaalo ka socdaan meelu ka mid ah wadanka, meela kalana qarka u saaran yihiin. Waxaad la wada socotiin in ay dowlado ku shaqayso nidaamka ah “ QOWDA MA QASHII OO WAXBA HA U QABAN”.
Dowladnimada iyo Aqoonsigu kuma yimaadaan xukun qabiil kalihi ka taliyo. U fiirso xukumada (madxaynaha, Waziirada, qaybaha muhiimka ah ee wasaarada iyo waaxyaha), Guurtida, iyo Baarlamanka. Boqolkiiba 80 ilaa 90 waxa weeyi Isaaq. Iska daa qabaailka kale eh, xukunka waxa haysta Qabiila kaliya oo ka mid ah qabaailka wadanka degan. Qabaailka kalana waxa loo tuuraa CAD QUUDHEED lamana dhegaysto codsiyadooda, iyo dareen sheegadkooka.
Uma baahna in waqti lagu lumiyo xaalka Somaliland ku jirto maanta oo waa mid laga wada ogsoon yahay. Waxa cadaan loo arkaa in nabadii ay khatar ku jirtu, cadaaladii baaba’day, kala qaysanaantii kor u kacday, dowladiina niyad jab ku dhacay. Wax aanu moron ku jirin in xukuumado isku diyaarinayso siddii ay iskaga meelayn lahayd xukun qaybsiga Somaaliweyn. Waxa inoo muuqata in hogaanada qabiilka Issaq ay sahan ugu jiraan sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen xukuumada Somalia.
Haddaba an iswaydiino cidda loo raadinaayo Aqoonsiga iyo dowladnimada. Aqoonsi waxa marka hore laga raadiyaa wadan gudihiisa. Waxa lagu gaadhaa Aqoonsiga: sinaan, cadaalad, saami qaybsi dhelitiran, nabad, eexasha la’aan, , iyo shicib is raacsan oo isku hadaf ah. Waa la ogyahay halka xaal maanta maraayo. Aqoonsibay sheeganyaane, waxa khatar ku jirta naba galyadii reeraha jaarka ah ee wada dhalashado ka dhaxayso ee galbeed iyo bariba kala degen. Isaaq iyo xukuumadan Somaliland waxay rabaan iyaga oo hagaaminaaya qabaailka kale ku dilaal galaan oo ay qayb libaax ka qaataan Somaliweyn.
Dowlada Somaliland waxay maagantahay shicibka uma sheegin oo beenbay ku maaweelisaa. Hase yeeshe inta wax fahamsani ama soo jeedi way hubaan in la qaaday wadada tegta Mogadisho oo loo kala badinaayo hilibka hasha la qalay. Maanta waxa lagu jiraa xaalkii Hadraawi ka yaabay ee u yidhi: “ Hal la qalay raqdeedaa lagu soo qaamaamoo, qosol wuxuu ka jooga kuwa buuraha qotada dheer ka arkaaya qiiq eh qarka soo jafaaye…”. Arinta sidaas ah ay qaarna dherigii aslaayaan oo ay ku hesayaan: “ Nooli tali allahayow si ay noqonba Mooyee..”.
TOBANNAAN DUKAAN OO SOOMAALI LEEDAHAY OO LAGU BOOBAY K/AFRIKA The tragedy of January 30- 1984 By Foosiya Cilmi coofle
One thought on “NOO TALI ALLAHAYOW SI AY NOQONBA MOOYEE…”
abdi ali 02/01/2013 at 2:42 pm
sxb waad salaman tahay marka hore waxna maad reebin lkn aan ku sexee mesha waxa ka taliya reerkaliye oo habar jeclo layidhaa oo sxb hargeysana naga qaaday caruurtiina naga laayee ma isaaq ahaan baan ku dhimanay ilayn kala reebi weydee geel jiruhu geela wuu wqda jiraa hadana wuu kala jiraa samaroona ragbaa dhergey ee samaroonoo dhami ma qatana markaa qabiilkastaba ragbay meheradu u shidan tahay ciise oo dhulka ka dega qoobay yarba waa ta la maslaxayee araboo hargeysa degana inta la boobay caruurtiina laga laayaey hadana cidi soo hadal qaadayn markaa maxay ku dhinteen ma isaaq ahaan ilayn isaaq baad tidhee